Malezia: Nampihantona Ny Vohikala Mahaleotena Mpampiely Vaovao Ny Sompatra An-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2011 14:19 GMT
Malaysiakini, vohikala mahaleo tena mpitatitra vaovao ao Malezia, dia nataon'ny mpanafika ho lasibatra ka tsy afaka nidirana mihitsy nanomboka ny Talata 12 Aprily 2011:
Io fanafihana io dia niseho andro vitsivitsy talohan'ny fifidianan'ny firenena Sarawak. Efa nampoizina fa hisy fiantraikany eo amin'ny vintan'ny antoko politika nasionaly amin'ny fifidianana manaraka ny valin'io fifidianana io.
Soa ihany aza fa navoaka tao amin'ny Facebook ireo lahatsoratra vaovaon'i Malaysiakini . Misy rohy hafa ahafahana mamaky ny tatitr'i Malaysiakini mikasika ny fifidianan'i Sarawak ireto ambany ireto:
Ankoatry ny Malaysiakini, dia lasibatr'io fanafihana io ihany koa ilay vohikala mpanakiana mafy ahitana ny tatitr'i Sarawak . Nanomboka teo dia niova adiresy vaovao izy.
Nanakiana ‘ireo paikady maloto ’ ampiasain'ireo ‘mpisompatra’ ireo i kranjini
Namporisika ny mponina eto amin'ny aterineto i Enrico Aditjondro avy ao amin'ny EngageMedia mba hanohana ny Malaysiakini